Kuveyt Menkul | Qaanuunka Arrimaha Khaaska
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee Kuweyt
Asturnaantaada ayaa muhiim noo ah. Waxaa naga go'an inaan ilaalino oo aan ixtiraamno macluumaadkaaga qaaska ah. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wuxuu sharraxayaa nooca macluumaadka shakhsiyeed ee aan kaa soo aruurinno marka aad doorato inaad adeegsatid adeegyadeenna, sida aan ugu adeegsan doonno xogtaada shakhsi ahaaneed, goorta iyo cidda aan la wadaageyno, iyo sida aan ammaan ugu ilaalinno. Waxay sidoo kale faahfaahin ka bixineysaa xuquuqdaada ku saabsan ka shaqeynta macluumaadkaaga shaqsiyeed iyo sida aad ugu adeegsan karto. Fadlan waqti si aad u aqriso oo aad u fahamto siyaasaddan. Waxaan isbedel ku sameyn karnaa Qoraalkan waqti ka waqti waana muhiim inaad ka hubiso Bayaanka wixii ku soo kordha. Dhammaan macluumaadka shakhsiyeed ee aan hayno waxay ku xirnaan doonaan bayaanka asturnaanta ee ku habboon waqtiga la cayimay. Haddii aan sameyno isbeddello aan u aragno inay muhiim yihiin, waan kugu soo wargelin doonnaa iyaga. Fadlan ogow in ogeysiiskan loogu talagalay macaamiisha iyo rajooyinka. Haddii aad tahay shaqaale ka socda Kuweyt Securities, qandaraasle Kuwait Securities ama adeeg bixiye saddexaad, macluumaadkaaga shaqsiyeed waxaa loo isticmaali doonaa iyadoo la raacayo heshiiskaaga shaqada, xiriirka qandaraaskaaga ama annaga oo nala soo xiriiraya iyadoo la raacayo siyaasadahayaga gaarka ah ee hadda jira. Markaad gasho degelladayada, oo ay ku jirto isticmaalka mid ka mid ah kanaallada isgaarsiinta si aad noola soo xiriirto, waxaan tixgelinaynaa shuruudaha bayaankan iyo sida aan u aqrinno una fahamno macluumaadka aad na siisay, oo ay ku jiraan xogta shakhsiga ah, ka hor intaanan noqon macaamiil. Ka dib markaad xisaab naga furto, waxaad ogolaatay in ogeysiiskan uu go'aamin doono sida aan u ururino, u kaydinno, u isticmaalno, ula wadaagno iyo haddii kale aan u shaqeyno xogtaada shaqsiyadeed iyo macluumaadkaaga shaqsiyeed iyo xuquuqdaada inta lagu guda jiro iyo kadib joojinta xiriirkeena ganacsi, oo ay ku jiraan wixii isbeddel ah.
Nooca Macluumaadka Shakhsiyeed Ayaan ururinaa oo keydinaa
• Magaca, Magaca qoyska iyo macluumaadka xiriirka
• Taariikhda dhalashada iyo jinsiga
• Macluumaadka ku saabsan dakhligaaga iyo maalkaaga, oo ay ku jiraan faahfaahinta ku saabsan hantidaada iyo deymahaaga, isku-dheelitirka koontada, xisaab-celinta, cashuuraha iyo warbixinnada maaliyadeed
• Shaqada iyo macluumaadka shaqada
• Xogta goobta
• Aqoonta iyo khibrada ganacsiga, dulqaadka halista iyo astaanta halista
• Cinwaankaaga IP-ga, astaamaha qalabka iyo khibrada ganacsi macluumaadka kale ee la xiriira
• Koontada bangiga, boorsooyinka elektarooniga ah, iyo macluumaadka kaararka deynta
• Waxa aad ka sameyso Websaydhadeenna ama Barnaamijyadeenna, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn xogta taraafikada, xogta goobta, diiwaannada internetka iyo macluumaadka kale ee isgaarsiinta. faahfaahinta booqashooyinka.
Waxaan ururin karnaa (ama heli karnaa) oo aan ka baaraandegi karnaa xogtaada shaqsiyadeed xaaladaha soo socda:
(a) Waxaad nagala soo xiriiri kartaa websaydhkayaga, barnaamijyadeenna ama qaab kasta oo kale (tusaale ahaan, foomkeenna internetka, e-maylka, emaylka, fakiska ama taleefanka). Tusaale ahaan, haddii aad gudbiso cabasho, ka warbixi dhibaatada adeegyadayada ama Bogaggayaga ama Barnaamijyadeenna, ama haddii kale la xiriir kooxdayada iibka, taageerada farsamada ama waax kasta oo ka tirsan shirkaddayada. Markaad furto koontadaada ganacsiga ama magacaaga, cinwaanka e-maylka, dalka, lambarka sirta ah, iwm. www.kuveytmenkul.com
(c) Oo ay ku jiraan soo saaraha aaladdaada iyo moodeelkaaga, cinwaanka IP-ga, nooca biraawsarka iyo nooca, dejinta aagga waqtiga, noocyada kumbuyuutarka ee lagu xidho iyo noocyada, nidaamka qalliinka, shabakadda shabakadda, madal, hawl wadeenka mobilada isticmaalkaaga iyo isdhexgalkaaga Websaydhkeena ama Codsiyada, oo ay ku jiraan ISP-gaaga. Waxaan ururin karnaa faahfaahinta booqashooyinkaaga Websaydhadeenna ama Barnaamijyadeenna (oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn xogta taraafikada, xogta goobta, diiwaanada shabakadda iyo macluumaadka kale ee isgaarsiinta). Waxaan tan ku sameeynaa emayl iyo kuukiisyada websaydhka iyo tikniyoolajiyad la mid ah oo lagu rakibo Websaydhadeena iyo Barnaamijyadeenna. Waxaan ku siineynaa siyaasadaha cookie mid kasta oo ka mid ah Websaydhadeena iyo Barnaamijyadeenna si aan kuu siino macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan sida aan u isticmaalno;
(d) haddii aad gasho koontadaada ganacsiga si aad ugu isticmaasho tikniyoolajiyadda barmaamijkeena iyo astaamaha kale iyo waxqabadka; e) haddii aad isticmaasho badeecadaha ganacsiga ee internetka aan ku siino. Fadlan ogow inaanan u siidayn faahfaahintaan cid saddexaad oo aan ka ahayn kuwa u baahan inay ogaadaan macluumaadkan macnaha guud ee adeegyada aan bixinno; ama
(f) isticmaalkaaga warbaahinta bulshada, oo ay ku jiraan badhannada 'like' iyo shaqooyinka la midka ah ee laga helo baraha bulshada.